Wst-001-2-1-1 | Zhongshan Well Sure Metal Product Co., Ltd
Steak / Pizza Mpanao
Spit Roters / Spit Rotisserie
Hazo pellet grill
Grill herinaratra BBQ
WST-001-5-1 Mivarotra eny an-dakozia an-tsokosoko tsy misy fidiram-bolam-barotra maimaim-poana ary ny lakozia ara-barotra sy ny grill bbq
WST-CF2 OUTDOOR COMPOS COMBO FANDROSO FANDROSOANA FOTOTRA FOTSINY STAINLSLEST BBQ OUTO OUTDOOR CABINET COBINET COTECHENT
WST-001-2 00 Manufactur CHINA CHANTSLES CUNCESSE Steel BbQ Grill Koreana Outdoor Koreana Kitchen Barbecue Gas Gril
1,6 Burners, 1 andaniny roa, miampy ny burner miverina
Ny herin'ny fahandroana 90000btu dia manome ny fiasa amin'ny grill, setroka, setroka, henika, horonana amin'ny fotoana mitovy, ary mahatanty na dia misy tsirony aza
8. Adiresy adidy feno stainless-sosona
Ny thermometer naorina naorina dia miantoka ny fandrefesana ny mari-pana amin'ny hafanana
3.Ny sisiny sisiny
Manolotra toerana fiomanana sy sehatra fanampiny
4Tlue-Lite Control Crops sy ny jiro Halogen anatiny
Azonao atao ny mankafy an'i Barbecue na dia amin'ny alina maizina aza
Mahasoa ny 360 ° rotisserie
Mihinana `` àry fa ny sakafo dia tsy mora aleha
6.cabinets miaraka amin'ny varavarana vy vy
Ho an'ny fitehirizana fitaovana BBQ sy tavoahangy entona milomano
Faritra fahandro 960 * 455mm
Fampivoarana hafanana 90000btu / 30.5kw
Ugnition piezo igniton
Motor Infutal 4w (220-240v, ac50hz), 2.5or3r / min
construction Vy vy sy granita
Fampisehoana Namboarina-in Grill 26.7kw, ny sisin'ny lafiny 3.9kw
vata fampangatsiahana 68l, 220-240v / 50hz,
ara-nofo # 304/430 stainless vy
endri-javatra Mora tafangona, mora voadio
Fampiharana Garden / Party / Outdoor
Fitaovana fiarovana Fitaovana fiarovana amin'ny afo
vita Dingana matte
asa BBQ, Mpanao steak, rongony akoho
hafanana 350 ℃
Hijery ny varavarankely Fitaratra feno herinaratra
Sakafo mahandro Steel 8mm stainless, 3pcs
Tavoahangy opener 1PC
Rantsan-kibo 2pcs, vy vy
Fehezan-kery hafanana Vovotra miaraka amin'ny fifehezana 180 °
jiro Jiro sy hazavana halady namboarina sy ny jiro tariby 6pcs
Kabinetra Mpitarika 2 sy varavarana fidirana 3
◪ Eclalis dia mpanamboatra matihanina amin'ny famokarana bbq grills / gony / pizza lafaoro / saribao / safoson-tsofina
◪ Izahay dia manome ny OEM& Serivisy ODM, 4-7 andro fiasana ho an'ny santionany.
◪Manana rafitra fitantanana tsara kalitao tonga lafatra isika. Azontsika atao ny manolotra ireo vokatra manome soso-kevitra& paikady marketing tsara kokoa.
◪ Manana taratasy fanamarinana feno izahay anisan'izany ny en1860-1, GS, LFGB, am, sns.
◪ Azontsika atao ny manome ny serivisy amidy sy ny serivisy an-tserasera, ary hanolotra ny vidin'ny teti-bola mba hahatratrarana ny fangatahanao.
Azontsika atao ny mamoaka grill barbecue barbecue, grill, grill, grill, grill, sangan-tsolika, lakozia ivelany, pizza sy mpanamboatra pizza ary mpanamboatra steak ary steak.
2. Azonao atao ve ny mamokatra arakaraka ireo santionany na sary sary?
Eny, afaka mamokatra araka ny santionany na sary ara-teknika ianao. Manana r&D ekipa mihoatra ny 10 taona ao amin'ny faritra BBQ.
3. Inona ny fepetra momba ny fandoavanao?
Amin'ny ankapobeny, manaiky ny T / T, tsy azo ihodivirana L / C ianao. Ho an'ny baiko tsy tapaka dia manaiky ny tahiry T / T 30% miaraka amin'ny p.o. ianao, ny fifandanjana mba ho andoavana alohan'ny fandefasana.
4. Inona ny fotoana fitarihanao amin'ny santionany sy ny famokarana?
Raha santionany dia mazàna dia maharitra 7-15 andro. Ho an'ny filaminana famokarana, mazàna dia maharitra 40-45 andro aorian'ny fanamafisana ny fanamafisana sy ny fandraisana ny fandoavanao mialoha. Ny fotoana fandefasana manokana dia miankina amin'ny entana sy ny habetsaky ny baikonao.
5. Inona no vokatra amin'ny vokatra ankapobeny amin'ny vokatrao?
Matetika izahay no manamboatra ireo vokatra miaraka amin'ny boaty baoritra vita amin'ny baoritra sy boaty hazo. Azontsika atao ihany koa ny manangona araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
6. Inona ny fepetra momba ny fandefasana anao?
Izahay dia manaiky exw, fob, cif, sns.
7. Mandra-pahoviana ny androm-piainanao?
3 taona raha ny vokatra dia ampiasaina amin'ny fomba tsara sy ny fivarotana tsara.
8. Mandra-pahoviana ny fiantrana ny vokatrao? Ahoana raha misy faritra tapaka?
Herintaona ny warranty antsika. Ao anatin'ny warranty, ny faritra tapaka dia azo soloina malalaka.
9. Rahoviana aho no afaka mahazo ny vidiny?
Ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fahazoana ny fanontanianao manokana. Raha any amin'ny maika ianao, dia alefaso aminay ny mailaka na avelao ny hafatra amin'ny fihodinan'ny varotra, mba hahafahantsika mamaly anao ara-potoana.
10. Ahoana no ahazoako santionany hanamarina ny toetranao?
Aorian'ny fanamafisana ny vidiny dia afaka mitaky santionany ianao mba hahitana ny kalitao. Raha mila santionany miaraka amin'ny logo ianao, ny Design, sns, dia atolotrao aminay ireo tsipiriany ireo, ka omenay anao ny saram-pianarana. Matetika ny saram-pandoavam-bola dia avo roa heny ny vidin'ny vidin'ny be. Ny fiverenan'ny saram-pamitana dia miankina amin'ny habetsaky ny filaharan'ny fandefasana be. Ny habetsaky ny baiko dia manapa-kevitra raha miverina daholo ny saram-pandoavam-bola na vao afaka miverimberina fotsiny.